Tanora tsy tara – Na mafy aza sy sedra sy fitsapana : tsy vahaolana ny famoizam-po | NewsMada
Tanora tsy tara – Na mafy aza sy sedra sy fitsapana : tsy vahaolana ny famoizam-po
Par Taratra sur 03/02/2016
Tsy mora ny mandalo ny taonan’ny fahatanora. Betsaka ny sedra sy ny olana tsy maintsy lalovana. Tsy tokony hahakivy fa atrehina izany. Tsy vahaolana ny fampizam-po ka mety hampivarilavo.
Akapokapoky ny fiainana ny tanora. Sarotra ny fianarana, sarotra ny mitondra tena, manahirana ny fiainana na ao an-tokantrano na eny amin’ny fiarahamonina. Ny olana ara-pitiavana, manginy fotsiny.
Betsaka ireo mitaraina sy very fanantenana. Mavesatra amin’ny tanora ny kihon-dalana eo amin’ny taon’ny adolan-tsento hiditra amin’ny fahamatorana. Miafara amin’ny famoizam-po sy famonoan-tena mihitsy ny hakiviana aterak’ireo karazan’olana ireo.
Tsy vahaolana anefa ny famoizam-po. Atrehina ny olana ary vahana. Porofon’ny hakanosana ny fahakiviana ary mariky ny faharesena amin’ny fiainana. Tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreny anefa no afaka manampy amin’ny famahana ny olana.
Ekena fa mety eo ny namana saingy misy fetra ihany ny fahafahan’izy ireny manampy ny tena. Tsy tokony hisorona amin’ny ray aman-dreny, araka izany, amin’ny zavatra rehetra mitranga amin’ny fiainana. Na inona olana sedraina na inona hasarotana lalovana, ny ray aman-dreny ihany no tena tokony ho namana akaiky miaraka mamaha ny olana.
Mila arahina ny tenin’izy ireny ary ankatoavina mba tsy hanenenana. Tsy tokony ho lasa lavitra ny olana sedraina raha nanaraka ny torohevitry ny ray aman-dreny hatramin’ny voalohany.
Fehiny, mahaiza mihaino sy mankatoa ny ray aman-dreny na sarotra aza ny fanatanterahana izany. Raha mandika izany ianao, zakao ny vokany: ny karazana olana sedrain’ny tanora tsy mpankato rehetra io. Aza manaiky resin’ny hakiviana sy ny famoizam-po fa atreho ary tadiavo hatrany ny vahaolana.
2 r&eacuteponses à "Tanora tsy tara – Na mafy aza sy sedra sy fitsapana : tsy vahaolana ny famoizam-po"
santos 12/07/2016 à 07:47
problem:ny olon 19ans v azo lazain mbol zazakeli.afak kapoana v rehf manao n ts mety,mbol mihera rehf mivok n trano…..
santos 12/07/2016 à 08:49
mis problem b.afk mb apina v azfd?